Zvinoenderana neyekupedzisira bvunzo, iyo Apple Watch haina mvura | IPhone nhau
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukurukurwa paApple Watch sezvo kunyangwe isati yatanga kuiswa kwayo kuramba kwayo mvura. Kutaura kwaTim Cook kwekutanga kwanga kusiri kukurudzira zvakanyanya, achivimbisa izvozvo ingangove inopesana nemishonga. Uye ndeyekuti yemawadhi wachi yatinofanira kutora hanya zvakanyanya haisi chaiyo pfungwa inokwezva.
Muhurukuro yepamutemo munaKurume apfuura, CEO weApple akange atove akananga uye akavimbisa izvozvo Apple Watch ndeye IPX7 yakasimbiswa, zvinoreva kuti inofanirwa kubata pakadzika mita imwe kwemaminitsi makumi matatu. Asi, maererano nemiedzo ichangoburwa, wachi yakarumwa yemapuro ine kutsungirira kwakanyanya. Nei Apple ichivanza kugona uku?
Pakati pevhiki ino, mutambi anonzi Ray WakerIyo tech blogger inoda kutsungirira mitambo, iyo Apple smartwatch yakaiswa pamiyedzo mitatu kuti izvionere yega kuramba kwemvura kweApple Watch. Zvinoenderana nezvavanowana, iyo Apple Watch haina kufanira kuti isapinda mvura.
Mumuedzo wekutanga, Waker anotonga iyo Apple Watch ku chikamu che1200m, umo wachi yakarumwa yemapuro yakarohwa yakadzokedzana yakanangana nemvura kumhanya kwakanyanya. Pakupera kwebvunzo, iyo yakagara 25 maminitsi, wachi yakashanda mushe, iine chikanganiso chete chekuti yekutarisa kwemoyo yakanga isiri chaiyo sezvaitarisirwa.
Mumuedzo wechipiri, mutambi akaisa Apple Watch pakumanikidza kukuru pasi pemvura, kuvhura kubva ku5m, 8m uye 10m kukwirira mudziva remuno. Apple inotaura zvakajeka pawebhusaiti yayo kuti Apple Watch haifanire kuburitswa kune zvinokanganisa, asi, pakupedzisira, wachi yakabuda isina kukuvara kubva pamuedzo wechipiri uyu.
Asi pamwe kuyedzwa kwakanyanya ndiko kwechitatu. Mukuyedza kwake kwazvino, Waker anonamira Apple Watch yake mukamera inotevedzera pasi pemvura dzvinyiriro 40m yakadzika. Iyo smartwatch haina kutambura chero kukuvara, oddly zvakakwana.
Iyo Apple Watch ine chitupa che "chete" IPX7, zvinova izvo zvatingaone pane webhusaiti yayo. Uye zvakare, Apple haikurudzire kuti isu tishambire newachi, asi chavanoda ndechekuti mudziyo wedu ugare kwenguva yakareba sezvinobvira pasina kukonzera matambudziko makuru. Bvunzo dzinoitwa naWaker dzinoratidza kuti kuramba kwemvura kweiyo smartwatch kwakakwirira zvakanyanya kupfuura izvo Apple zvaanoda kuti tione. Rega mumwe nemumwe atore mhedzisiro yake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvinoenderana neyekupedzisira bvunzo, iyo Apple Watch haina mvura. Nei Apple ichihwandisa?
sekuzviona kwaunoita Aaron Alcocer Gamboa
Aaron Alcocer Gamboa akadaro
uriku oda yako?
Pindura kuna Aaron Alcocer Gamboa
Daniel macovei akadaro
Iwe unofungei nezvaAntonio Munoz Ortega, Chema Najarro Peloche?
Pindura kuna Daniel Macovei
Antonio Munoz Ortega akadaro
Daniel Macovei ndinofungidzira kuti chirongwa chekuchengeta apuro cheiyo Apple wachi chinovapa mari inokosha…. Iye zvino ngatione kuti ndiani uyo anoshandisa kanenge € 400 uye anonyorova pasina Apple hanya, kana vange vabata ino inishuwarenzi vanoichinjira mvura. … Ngatione zvinoitika
Pindura kuna Antonio Munoz Ortega
Chema Najarro Peloche akadaro
Chitupa chainacho chekuti ipx7 inosimbisa kuti inonyudza kusvika pamamita 1,5 pakadzika kusvika pamaminitsi makumi matatu ... Vanoiviga ini ndinotenda kupora mune hutano ...
Pindura Chema Najarro Peloche
Ini ndinofunga ibhizinesi rekuchengetwa kweApple
Hapana nguva ivo vari kuzviviga sezvo iro peji rinotaura zvakajeka chitupa chauri kureva. zvine musoro ivo havasi kuzotaurira kana kuratidza kudhivha mavhidhiyo, hazvisi zvakajairika muapuro.
Lisergio  (@ LI5ERG10) akadaro
Zvakare mumaelevhuru inoisa 4 vashandi 380kg (zvimwe kana zvishoma) asi ivo vanobata huremu hwakawanda, chii chinoitika, kana zvikaitika kuti mashanu akaiswa uye huremu i5 kg uye erevheta inodonha, haisi mhosva yemugadziri ...
Iyi inzira yekuona hunhu…. Uye kuti haizokundike ...
Pindura Lisergio  (@ LI5ERG10)
Ini ndinobvumirana naLisergio, zvinoitika zvakafanana nezvimwe zvigadzirwa kana zuva rekupera kwechikafu.
Kune akawanda mavhidhiyo anoratidza kuti kana zvakanyanyisa kunyudzwa pasi pamwe kubva pazana rezana havana kusangana nepesenti yekusimbisa
Sei apuro richivanza? arikuhwanda kupi? Kana pane peji vakaisa mhando yesitifiketi kana mhando yekudzivirira mvura ndiyo wachi. zvine musoro havazoti iwe unogona kudhizaina newachi, nezvimwe. nekuti kana mune yakaipa kesi iwe wakakuvadzwa, saka mhosva yakanangana neapuro.
Kana uine chitupa chimwe hazvireve kuti une chinotevera. Hazvina kuvimbiswa. Chii chaunoda, kuti chimwe chinhu chivimbiswe icho chaasina kukodzera nekuti mukomana akazvikanda mudziva uye wachi yake inogona kuibata. Dzimwe nguva unosangana nenhau dzakadai dzisiri.
Ini ndinobvumirana nezvataurwa pano, nekuti wachi yemurume uyu yakapona padziva hazvireve kuti ichagara ichikushandira.
Zvisinei, ini handizove uyo ndinosvetukira mudziva ne € 400 pachanza changu
eduardo fabio segovia akadaro
sarudzo yekutenga yakaoma. nekuti kana tikaterera kune zvakarairwa nekambani tinotora sezvakangoita kuti hainyurwe kunze kwekutora dhipiti. zvakadaro. Zviri kune vatengi kuzvitenga kana kwete. Parizvino ini ndichamirira zvishoma kuti ndione makomendi uye kushoropodzwa pamusoro pekumirisana kwayo nemvura, ziya pamwe nekurohwa kudiki.
Pindura kuna eduardo fabio segovia